UKhanye usuke ekhuluma iqiniso ngeChiefs, kusho uNdlanya
June 23, 2021 Impempe.com
Owayengumgadli weKaizer Chiefs engalibheki ipali, uPollen “Trompies” Ndlanya, uthi akukho okubi okwenziwa uJunior Khanye ngokubeka imibono yakhe ngendlela elidlala ngayo leli qembu laseNaturena kulezi zinsuku. UKhanye usenyamanambana kubalandeli baMakhosi abakholwa ukuthi akalifuni leli qembu ngenhliziyo yakhe yonke.
Abaningi banenkolelo yokuthi uKhanye akasoze asho into enhle ngeChiefs ngoba sengathi kukhona okungamphathanga kahle ngesikhathi esayidlalela. UKhanye wagqama kwiChiefs esengumfanyana, futhi wayenekhono elimangalisayo, eyinyathela kuchwaze izihlwele.
UTrompies uthe uKhanye unelungelo lokusho lokhu asuke ekubona, ngakho akumele kube sengathi unenzondo anayo ngeChiefs.
“Uyabona njengoba ungifonela ucela umbono wami ngeChiefs, kumele ngiphawule ngendlela engibona ngayo. Lokho kusuke kungasho ukuthi iqembu ngiyalizonda.
“Ngeke ngisho into okungeyona ngoba nakhu ngifuna ukujabulisa abalandeli beqembu elithile,” kusho uNdlanya owake wayibamba nakwi-Orlando Pirates.
“Uma ubheka kahle uma uKhanye ekhuluma ngeChiefs uhlale eshaya emhloleni ngakho konke. Akayizondi iChiefs kodwa usho lokho okuyikhona. Uma imoto imhlophe ngeke ukushintshe lokho uthi ingomunye umbala.
“UKhanye yindlela abona ngayo umdlalo webhola nesimo seqembu, futhi akukho okuphabhene akwenzayo. IChiefs sekunesikhathi eside ingenzi kahle okuyinto ebonwa yinoma ubani. Abalandeli bayohlale bengabalandeli, kodwa ekugcineni akumele sibenze izilima uma siphawula.
“Ngeke ngivele ngithi iChiefs izoshaya i-Al Ahly kowamanqamu weCAF Champions League. Bese ngenzenjani uma kungesenzeki lokho?” kubuza uNdlanya.
Funda nala: UMotaung Junior ucacisa ngobukuya kukaBaxter
Nokho le nkakha ithe iChiefs inethuba elihle kakhulu kwiChampeions League njengoba isizodlala umlenze wesibili ekhaya neWydad Casablanca. Emlenzeni wokuqala iChiefs iwine ngo 1-0 inganikiwe lutho ekuhambeni.
“Benze kahle kakhulu kuze kube yimanje, futhi yinto enhle kubo njengoba bengenzanga kahle kwiligi. Mhlawumbe ukungenzi kahle kwiligi kuyizinkomba zokuthi iCAF ibekelwe bona.
“Okusele nje ukuthi bona baqhubeke nokuzimisela,” kuchaza uNdlanya. Ebuzwa ukuthi iChiefs ingayiwina ngempela yini iChampions League, uNdlanya akafunanga ukuzifaka ingcindezi kodwa uzwakale enalo ithemba.
“Kungenzeka noma yini njengoba sebefike kulesi sigaba. Konke kusezandleni zabo. Nokho kumele sikhumbule ukuthi uma bewina kowandulela owamanqamu bangase badlale ne-Al Ahly eyiqembu elinzima.”
Yini okumele yenziwe yiChiefs emlenzeni wesibili seyibhekene neWydad? “Okubalulekile ukuthi iChiefs izigcine ihamba phambili kulo mdlalo. Angisho ukuthi kumele ihlale emuva, ipake ibhasi.
“Kodwa kumele idlale ngendlela yokuthi ingasheshe idedele igoli, bese izama ukuhlasela ithole igoli kuqala,” kuphetha uNdlanya. IChiefs izokwamukela iWaydad eFNB Stadium, ngoMgqibelo, ngo-6 ntambama.
Previous Previous post: Georgia, yiyonanto eduma ekhanda kumaBhokobhoko
Next Next post: Abadlali beRoyal AM bafuna ukudlala eyokuhlunga